D Media - D Family Businesses
Thank you for visiting our website. Our D Media isaplace where you can find our updated news and activities on the D Family Businesses.
If you need more information on the news and updated activities, please contact our media spokepersons at the following address:
Min Thaw TUN, Public Relations Manager
David AYE MYAT, Services Manager
posted Jan 5, 2015, 10:44 AM by David Godwiller [ updated Jan 5, 2015, 6:39 PM ]
ကျတော်တို့ D Bistro ကနေပြီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက် D Chef’s Special “Butter Rice” လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ခံတွင်းလိုက်ပြီး စားမြိန်စေမယ့်ဒီထောပတ် ထမင်းကြော်ကို ထမင်းပူပူလေးရယ်၊ သီဟိုဠ် စေ့ရယ်၊ စပျစ်သီးခြောက်ရယ်၊ မုန်လာဥနီ(ခါကြက်ဥ)၊ ပဲစိမ်းသီးလေးတွေ နဲ့ ထောပတ် လေးနဲ့ပူရုံလေးလှိမ့်ကြော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထမင်းလုံးတွေက ကပ်မနေပဲ သီးခြားစီ နဲ့ အရသာကို အချို၊ အဆိမ့် ရသာစုံခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီလဲလုံးဝ မပါတဲ့အတွက် အီလဲမအီပဲ သစ်သီးဆံတွေ စပျစ်သီးခြောက်တွေ နဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးသစ်ဥတွေကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ထောပတ်ထမင်းကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယား ကမ်ချီနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းမုန်ညှင်းချဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခံတွင်းလိုက်အောင် ရောစားမယ် ဆိုရင်တော့ အရမ်းကိုအရသာပြည့်စုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ လာစားစားမိသားစုနဲ့ပဲ လာလာ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အဆင်ပြေ ဆုံးဖြစ်အောင် D Bistro ကဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကြိုဆိုပါရစေနော်……….
We would like to introduce our D Chef's Special "Butter Rice" to you
For the best taste of this mouth soothing Butter Rice is made of cooked rice, Cashew Nuts, Raisins, Carrot and Green beans. The rice was only fried byasmall spoon of heated butter, the grains are not sticky and loosely separated just enough to sooth and give the fantastic taste to your tongue.
To perfect its taste the butter rice is best to go with either Korean Kimchi or Traditional Shan fermented vege (Mone Nhynn Chin).
For Gathering with friends or your loved ones; D Bistro is to best serve you foramoment in time.
Brought to you by D Family Businesses
posted Nov 28, 2014, 12:16 AM by David Godwiller
Skincare also needed for men